कसरी फस्टाउँछ नेपालको कृषि ? - Karobar National Economic Daily
कसरी फस्टाउँछ नेपालको कृषि ?
query_builderMarch 7, 2017 8:33 AM supervisor_accountविवेक धिताल visibility708
करिब ६७ प्रतिशत नेपालीको जीविका कृषिले नै धानेको छ । नेपालको कृषिको प्रवृत्ति विश्वको थुप्रै मुलुकको भन्दा फरक किसिमको छ । वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधताको दृष्टिले हाम्रो खेती पद्धति अति राम्रो छ ।
नेपालमा लगभग १ सय ८० विभिन्न प्रजातिको खेती गरिन्छ । तर, अन्य मुलुकमा हाईब्रिडको प्रयोगले परम्परागत प्रजाति लोप हुने अवस्थामा छन् । युरोप, अमेरिकामा प्रतिहेक्टर २ हजार ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ भने नेपालमा मात्र १ सय ४० ग्राम । यो खपत हुने दर बढ्दो रूपमा छ, तर पनि सुधार्नका लागि समय छ ।
अहिले कृषि कमजोर भयो भनिहाल्न मिल्दैन, किनकि धान, मकै, गहँु, फलफूल, तरकारीको उत्पादकत्व हेर्ने हो भने हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ ।
कृषिको मुख्य समस्या
कृषि उत्पादनमा चाहिने स्रोतसाधन, मल, औजार, भौतिक निर्माणका सामग्री जेजे छन्, प्रायः सबै भारत वा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । यसले गर्दा उत्पादन खर्च झन् बढ्न जान्छ ।
भूउपयोग योजना कमजोर हुँदा आफ्नो जग्गामा के राम्रो फल्छ भन्दा पनि के गर्न सजिलो वा कुन तरकारीको बजार भाउ बढी छ भन्ने आधारमा बालीचक्र निर्धारण गरिन्छ । यसो गर्दा कृषि लाभदायी हुन सक्दैन ।
एक वर्षमा यौटा जग्गामा कति थरी वा कति पटक बाली उत्पादन गरिन्छ, त्यसलाई क्रपिङ इन्टेन्सिटी भनिन्छ । एक वर्षमा धान–गहुँ–मकै उत्पादन गरिने जग्गाको क्रपिङ इन्टेन्सिटी ३ सय प्रतिशत हुन्छ ।
कृषि पेसामा अर्थ र श्रम शक्तिले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । कुनै बाली लगाउनुअघि किसानले आफूसँग श्रम र पुँजीको उपलब्धताबारे सोच्नुपर्छ । प्रायः नेपाली किसानहरू स्रोतको ख्याल गर्दैनन् र पछि ऋणमा फस्छन् ।
हाम्रो बजारमा आज ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी भएको तरकारीे भोलि बिहान १० रुपैयाँ हुन सक्छ । २०१५ बाट लागू गरिने भनिएको एडीएसमा कृषि बिमाको कुरा गरिएको छ । तर, हालसम्म यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उत्पादनको सुनिश्चितता र उत्पादन नभएको खण्डमा हुने घाटाको कारण खेतीयोग्य जग्गा बाँझो बस्ने क्रम जारी छ । कृषि विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष किसान लक्षित कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम र अन्य थुप्रै योजना ल्याएको हुन्छ ।
तर, सञ्चारको कमीले यो सूचना धेरै कम किसानसमक्ष पुग्छ । बजेट फ्रिज भएर जान्छ । हरेक वर्ष अनुदानमा आएको टनेल प्लास्टिक, ट्र्याक्टर, बीउबिजन र अन्य समाचार किसानसामु पुग्न एकदम जरुरी छ ।
जबसम्म खेती–किसानीको सम्मान गर्न सक्दैनौ, तबसम्म कृषि उँभो लाग्दैन । गरिब किसान, लगानीको कमी, महँगो ब्याजदर अर्को बढ्दो समस्या हो नेपाली कृषिको । लगानीबिना उत्पादन सम्भव छैन ।
बाली बिमा, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी लगानी, बजार व्यवस्थापन, यातायात, एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक, भूउपयोग योजना नीति सरकारले लिएको छ । यससँगै किसान परिचयपत्रको कुरा पनि अघि बढेको छ । अब यो कार्यनीतिलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्छ ।
किसान गरिब छन्, तर बिचौलियाहरू साइकल, मोटरसाइकल, अनि कारमा पुगिसके । उचित बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिताताका लागि राज्यले उत्पादित सम्पूर्ण बाली खरिद गर्ने र बिक्री–वितरणको काम जिम्मा लिनुपर्छ ।
यसो गरिए न किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्छ न उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्छ । नगरस्तरमा यो काम गर्न असम्भव होइन । युरोपका विभिन्न देशमा यस्तै पद्धति लागू गरिएको छ ।
टिभी, फेसबुक आदि आमसञ्चारका किसानको हातहातमा पुगेको छ ।
यस्तोमा ६७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता किसान भएको देशमा कृषि च्यानल सञ्चालन गर्नुपर्छ । जग्गा बाँझो राखेमा जरिवानाको अवधारणा आएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ हँुदै छ या त बाँझो छ ।
भूउपयोग योजना निर्माण गरेर कस्तो जग्गामा केके गर्ने निर्धारण गरेर अघि बढ्ने हो भने अव्यवस्थित सहरीकरण पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । अर्काको सिको गर्दागर्दै राम्रो र नराम्रो नीति दुवै अपनाइराखेको छ हाम्रो कृषिनीतिले ।
एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा सुन्दा राम्रो हो, तर दिगो हुन नसक्ला । जब जैविक विविधता हटाएर एक उत्पादन (जसलाई मोनो कल्चर भनिन्छ) तर्फ लगिन्छ, तब कृषि दिगो हुन सक्दैन । यो हामीले थुप्रै विकसित मुलुकको कृषि पद्धतिबाट पनि सिक्ने कुरा हो ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले रासायनिक मलको प्रयोग वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ, तर के यो दिगो होला त ? उत्पादन वृद्धि गराउन सर्वप्रथम सिँचाइ र बीउबिजनमा तथा उत्पादन कायम राख्न बजार र किसानको हक हितको कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
कृषि राज्य र किसानमा मात्र निर्भर छैन । उपभोक्ता पनि कृषिको उत्तिकै सरोकारवाला हुन् । कृषि नीति–नियम निर्माण गर्दा उपभोक्ताको रुचि, किसानको रुचि, खेती गर्ने जमिनको क्षमता, स्रोतसाधन, पूर्वाधार आदि सबैमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अमेरिकामा जुन पद्धतिले कृषि सफल भयो, हाम्रोमा त्यही पद्धति कदापि ठीक हँुदैन । कृषि भनेको वातावरण, हावापानी, स्रोतसाधन, भूधरातल र अन्य थुप्रै कुरामा निर्धारित हुन्छ ।
दुई भूभागमा यौटै सिद्धान्तले काम नगर्न सक्छ । बाहिरी तत्व भन्दा आफ्नो श्रम, सीप, स्रोत प्रयोग गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कृषि सँगसँगै उद्योग (मल, औजार, उपकरण) व्यवसाय, वातावरण, बजार र अन्य सम्बन्धित विषयहरूको समानान्तर विकासको नमुना खोज्नुपर्छ ।